Muxuu La Ooyay Garsoorahii Kulankii Gemany & Netherland Ee Xalay, Maxaase Dhexmaray Isaga Iyo Virgil van Dijk? | Laacib.net
20-11-2018 Abdirashid Mohamud "SHarDinHO" 2
Xulka Netherlands ayaa gaaray semi final-ka tartanka UEFA Nations League kadib markii ay barbaro la galeen qaranka Germany kulankii xalay dhacay, labada wadan waxey soo bandhigeen ciyaar aad loo jecleysto, laakiin qof walba wuxuu hadal hayaa wixii dhacay kadib dhamaadkii ciyaarta.
Garsoorahii kulanka Ovidiu Hategan ayaa ilmeeyay kadib dhamaadkii ciyaarta, wuxuuna muujiyay sida uu ugu adkeystay xaalad aan caadi aheyn una garsooray kulan weyn maadaama maalmo ka hor ay geeriyootay hooyadiis.
Virgil van Dijk oo dhaliyay daqiiqadii 91-aad goolka barbaraha ee qaranka Netherlands ayaa soo bandhigay sida uu u yahay qof caaqil ah kadib markii uu fahmay dhibta garsoorka, si qurux badan ayuuna u sabar siiyay.
Garsoorahaan isagoo ogsoon inuu dhex-dhexaadinayo kulanka labada wadan ayey dhibaatada ku timid, wuxuuna go’aansaday inuu guto waajibkiisa, balse ilmo ayuu isku celin waayay markii uu yeeriyay seeriga dhamaadka ciyaarta.
“Wuxuu ahaa qof niyad jabsan, ilmo ayaana indhahiisa ka socotay sababtoo ah wuxuu waayay hooyadiis” ayuu yiri Virgil van Dijk oo kadib kulanka saxaafadda u xaqiijiyay sababta uu garsoorka u ilmeeyay.
“Waxaan u rajeeyay adkeysi, waxaana u sheegay inuu wax fiican sameeyay”
“Waa wax fudud, balse waxaan rajeynayaa iney caawiso”
27-jirka Liverpool ee wakhtiga ugu fiican waayahiisa ku jira, wuxuu xalay kasbaday qalbiga dad badan oo Holland ah maadaama uu xulkiisa gaarsiiyay darajo sare muddo kadib.
yusuf macalin nuur says:
21-11-2018 at 7:03 pm
Virgil wuxuu dib usoo ciliyay sharafta qaranka Holland
21-11-2018 at 7:41 am
Virgil van dijk wax wanaagsan ayuu sameeyay. Garsoorkuna waxa uu muujiyey heerka dulaaadkiisa. Dutchlions guul ayaan u rajeynayaa.